Hitsahatra tsy hivarotra any Amerika, Afrika ary ampahany amin'ny Azia | i Sony Androidsis
Sony dia mamoaka ny paikadiny vaovao ho an'ny telefaona finday
Eder Ferreno | | Finday, Sony
Sony dia teo amin'ny tantara no iray amin'ireo marika manan-danja indrindra ary amidy indrindra amin'ny Android. Na dia tato anatin'ny taona vitsivitsy aza dia niova ny toe-javatra ho an'ny orinasa, fa ity taona ity dia nanana ny telovolana voalohany ratsy indrindra. Noho ny faharatsian'ny varony, izay nahitana fihenan-danja be nandritra ny taona maro, nisafidy ny hamindra ny paikadiny ny orinasa. Ka mifantoha amin'ny tsena manome anao ny vokatra tsara indrindra.
Nihevitra izany fa roa volana lasa izay dia nambara de Tokony hijanona tsy hivarotra finday any Amerika Latina i Sony. Fanapahan-kevitra noraisin'izy ireo noho ny faharatsian'ny varotra amn'ireny tsena ireny. Ankehitriny, efa ananantsika ny antsipiriany rehetra momba ity paikady ity, izay midika fa fivoahan'ny orinasa amin'ny tsena maro kokoa.
Ny orinasa dia tsy kivy amin'ny sehatry ny smartphone. Noho io antony io dia hanohy handefa telefaona any am-pivarotana izy ireo, na dia mampiditra paikady vaovao aza izy ireo, izay antenain'izy ireo hanana vokatra tsara kokoa. Ny zavatra ataon'izy ireo dia mifantoka amin'ireo tsena izay anaovany ny tsara indrindra. Filokana lozika eo aminao.
Ny Sony dia manambatra ny fizarana findainy amin'ny fakan-tsary, fahitalavitra ary feo
1 Nijanona tsy nivarotra tany Amerika i Sony
2 Paikady vaovao
Nijanona tsy nivarotra tany Amerika i Sony
Amerika latina no tsena voalohany nanamafisan'i Sony fa nijanona tsy nivarotra telefaona intsony izy. Rehefa nambara izany dia efa noraisina sahady fa ilay orinasa dia ny hanao doka amin'ny firenena hafa izay izy koa hijanona tsy hivarotra ny fitaovany. Tonga ny fotoana, noho izany dia manana an'ity data ity izahay, izay nozarain'ny orinasa mihitsy.
Nifidy ny hampihena be ny isan'ny tsena fivarotana ny findainy ny orinasa. Satria manolo-tena hifantoka amin'ny tsena vitsivitsy izy ireo, araka ny hitantsika amin'ity sary etsy ambony ity, izay nozarain'ny orinasa tao amin'ny bilaoginy mihitsy. Atỳ, Sony dia hifantoka amin'i Japon, Taiwan, Hong Kong ary ny tsena lehibe sasany any Eropa. Izy ireo no firenena amidiny ny tsara indrindra, ka mijanona ao izy ireo.
Midika izany fa misy tsena sasany izay hijanonan'ny Sony amin'ny fivarotana. Ho an'i Amerika Latina efa voamarina dia tsena roa lehibe no ampiana. Amin'ny lafiny iray, ny Moyen Orient, izay tsy mbola nahataperan'ireo orinasa mandresy lahatra ireo mpampiasa azy mihitsy. Nambara ihany koa ny fiaingany tany Etazonia sy Kanada. Raha ny marina, amin'ity paikady ity dia mijanona tsy mivarotra ny kaontinanta amerikana iray manontolo ny orinasa. I Afrika dia kaontinanta iray hafa izay nijanonany ny fivarotana. Fahagagana izany, satria nanana fanantenana lehibe tamin'ity tsena ity ny orinasa.
Ity paikady vaovao ity dia tokony manampy vokatra tsara kokoa amin'ny fizarana telephony. Ny orinasa dia nanambatra ity fizarana ity tamin'ny fizarana feo tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Dingana voalohany amin'ity paikady vaovao ity, izay anarahan'izy ireo manatsara ny valiny hatramin'ny farany. Ho fanampin'izay, misy ihany koa ny fiovana eo amin'ny sehatry ny telefaona izay navoaka eny an-tsena.
Amin'ny lafiny iray, toa izany Ny laharan-telefaona mifatotra dia horoahina hiala. Farafaharatsiny mba efa misy ny tsaho mandritra ny roa volana momba ny drafitra mety hananan'i Sony amin'ity lafiny ity. Raha nandao anay vao haingana ny orinasa telefaona dimy santimetatra, Gaga ny rehetra. Saingy tsy dia manana ho avy firy io faritra io, eo amin'ny tsena izay ahitantsika ny tenantsika miaraka amin'ny efijery lehibe kokoa amin'ny finday avo lenta.
Ankoatra izany, Sony koa dia namindra ny famokarana findainy. Hatramin'izao, namokatra ny finday avo lenta ao Shina ny orinasa. Saingy lafo loatra ity famokarana ity, izay nahatonga ny orinasa hahita toerana vaovao ho azy. Vietnam no firenena voafidy tamin'izany. Fanoloran-tena amin'ny fampihenana ny vidiny, izay azo antoka fa mety ho fanampiana tsara hanatsara ny valin'ny fizarana telephony an'ity orinasa ity. Noho izany, ho hitantsika raha hanampy ireo fizarana finday avo lenta an'ny orinasa ireto fanovana ataon'ny orinasa ireto. Ahoana ny hevitrareo momba ireo drafitra ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony dia mamoaka ny paikadiny vaovao ho an'ny telefaona finday
Ny Huawei Mate 20 Pro dia nesorina tamin'ny topi-maso Android Q
Tsy maharitra ny fatiantoka: ny fizarana finday an'i Sony dia nandao tamin'ny fomba ofisialy ny ankamaroan'ny tsena manerantany